Shina Fitaovana fanaovana lafarinina varimbazaha lehibe Fitaovana sy orinasa | Chinatown
Ao amin'ny faritra fanadiovana dia mandray ny teknolojia fanadiovana karazana fanamainana izahay. Mazàna dia misy sivana in-2, fikotrehana in-2, famoahana vato 2, fanadiovana indray mandeha, hetaheta 5 heny, fanimbana indroa 2 heny
fisarahana sy ny sisa. Ao amin'ny faritra fanadiovana dia misy rafitra faniriana marobe izay afaka mampihena ny famaohana vovoka amin'ny milina ary mitazona tontolo iasana tsara.
ny offal thecoarse, ny habe afovoany ary ny tsara any anaty varimbazaha. Ny faritra fanadiovana dia tsy mety amin'ny varimbazaha ampidirina amin'ny hamandoana ambany ary koa ny varimbazaha maloto mety avy amin'ny mpanjifa eo an-toerana.
Ao amin'ny faritra fikosoham-bary, misy karazana rafitra efatra hanodinana ny varimbazaha ho lafarinina. Izy ireo dia rafitra 5-Break, rafitra 7-Reduction, rafitra 2-Semolina ary rafitra 2-Tail. Ny mpanadio dia natao manokana hahazoana semolina madio bebe kokoa nalefa tany amin'ny Reduction izay manatsara ny kalitaon'ny lafarinina amin'ny sisiny lehibe. Ireo rolin'ny rafitra Reduction, Semolina, ary Tail dia rolin-droraka izay nipoaka tsara. Ny famolavolana iray manontolo dia hiantoka ny tsy dia misy bran afangaro ao anaty bran ary hampitomboina ny vokatra farine.
Satria ny rafitra fananganana pneumatika namboarina tsara, ny fitaovana fanodinam-bola manontolo dia nafindran'ny mpankafy fatratra. Ny efitrano fikosoham-bary dia hadio sy madio ara-pahasalamana ho an'ny faniriana hanana faniriana.
Fizarana fampifangaroana koba
Ny rafitra fampifangaroana koba indrindra dia ahitana ny rafitra mpampita pneumatika, ny rafitra fitehirizana lafarinina, ny rafitra fampifangaroana ary ny rafitra famoahana lafarinina farany. Io no fomba tonga lafatra sy mahomby indrindra hamokarana lafarinina voafaritra tsara sy hitazonana ny fitoniana kalitaon'ny lafarinina. rafitra fampifangaroana, misy fitoeram-panangonana lafarinina 6. Ny lafarinina ao anaty fitoeram-panangonana dia atsofoka ao anaty fitoeram-panangonana lafarinina 6 ary fenoina farany. Ny lafarinina dia afangaro tsara rehefa esorina amin'ny fitoeram-bary izy ireo. Hijery ny bika rehetran'ity matoanteny ity eo amin'ny Raki-bolana Volapoky eto amin'i Wikibolana.
Ny milina famonosana rehetra dia automatioc. Ny milina famonosana dia manana endri-javatra amin'ny fandrefesana avo lenta, haingam-pandeha haingana, azo itokisana sy milamina miasa. Afaka mandanjalanja sy manisa mandeha ho azy izy io, ary afaka manangona lanjany. Ity milina fanjairana ity dia manana fanjairana sy fanapahana mandeha ho azy. Ilay milina famafana dia miaraka amina paosin-kitapo fonosana voaisy tombo-kase, izay afaka misoroka ireo fitaovana tsy hivoaka. Ny famaritana ny fonosana dia misy ny 1-5kg, 2.5-10kg, 20-25kg, 30-50kg. Ny mpanjifa dia afaka misafidy famaritana entana isan-karazany mifanaraka amin'ny takiana.
Fanaraha-maso sy fitantanana herinaratra
Amin'ity faritra ity dia hanome kabinetra fanaraha-maso herinaratra, tariby famantarana, fantsona tariby sy tohatra tariby ary faritra fametrahana herinaratra hafa izahay. Ny fampidirana sy ny tariby mandeha amin'ny herinaratra dia tsy tafiditra afa-tsy ny mpanjifa takiana manokana. Ny rafitra fanaraha-maso PLC dia safidy tsy voatery ho an'ny mpanjifa. Ao amin'ny rafitra fanaraha-maso PLC, ny masinina rehetra dia fehezin'ny Programmed Logical Controller izay afaka miantoka ny milina mandeha mafy sy milamina. Hamoaka didim-pitsarana vitsivitsy ny rafitra ary hanao fanehoan-kevitra mifanaraka amin'izany raha misy milina diso na mijanona tsy ara-dalàna. Mandritra izany fotoana izany dia hanaitra sy hampahatsiahy ny mpandraharaha izy handamina ny lesoka. Ny faritra elektrika misy ny skneider dia ampiasaina ao anaty kabinetra elektrika. Ny marika PLC dia Siemens, Omron, Mitsubishi ary marika iraisam-pirenena hafa. Ny fitambaran'ny famolavolana elektrika tsara sy azo antoka dia miantoka ny fikosoham-bary manontolo mandeha tsara.
LISTA PARAMETER teknika
Fahafahana (t / 24h)
Mpiasa isaky ny shift
Pneumatika / herinaratra
Teo aloha: Twin Screw Volumetric Feeder
Manaraka: Drawer andriamby
Mpanamboatra lafarinina kely Plansifter